Izithili zoNyulo eKhanada
ECanada, ukukhwela kwinqanaba likhetho. Yindawo okanye indawo yendawo emele kwiNdlu yeeMiyunithi yilungu lepalamente, okanye kumanyulwa kwiphondo kunye nakwimimandla yommandla ummandla omelelwe lilungu lephondo kwintlanganiso yesigqeba.
Amagqabantshintshi aseburhulumenteni kunye namanqwanqwa asemaphandleni anokufumana amagama afanayo, kodwa ngokuqhelekileyo anemizila eyahlukeneyo. Amagama ngokuqhelekileyo ngamagama ahlala kwiindawo zendawo ezichonga indawo okanye amagama omntu wembali okanye umxube wezo zombini.
Amaphondo anamanani ahlukeneyo kwizithili zonyulo zombuso njengoko iindawo zinezithili enye kuphela.
Igama lokugibela livela kwiLizwi elidala lesiNgesi elithetha isahlulo sesithathu senqila. Akusekho ixesha elisemthethweni kodwa lisetyenziswa ngokubanzi xa sibhekisela kwizithili zee-Canadian zonyulo.
Kwakhona ukwaziwa njenge- district election; ubume , i- circonscription , comté (kwinqanaba).
Izithili zeNyulo zaseKhanada
Ukunyuka kwamanye amazwe kubuyisela elinye iLungu lePalamente (MP) kwiNdlu yaseKhanada yase-Canada. Zonke iinqununu zezithili zodwa. Imibutho yasekuhlaleni yamaqela ezopolitiko ayaziwa njengemibutho yokukhwela, nangona ilungu lezomthetho ngumbutho wesithili sokhetho. Izithili zezithili zonyulo zonyulwe ngamagama kunye neefowuni yesithili e-five.
KwiZithili zePhondo okanye kwiNyulo yoNyulo
Icandelo ngalinye lephondo okanye indawo yesithili libuyisela omnye ummeli kumthetho wephondo okanye wendawo.
Isihloko sincike kwiphondo okanye kwintsimi. Ngokuqhelekileyo, imida yesithili iyahluke naleyo yendawo yesithili senyulo kwisithili esifanayo.
Utshintsho kwiZithili zoNyulo zikaRhulumente: Iinqwelo zokuhamba
Iinqwelo zokuqala zazisungulwa nguMthetho waseMntla waseMntla waseMntla waseMelika ngo-1867. Ngaloo xesha, kwakukho ukulungiswa kwezi-181 kumaphondo amane.
Zihlala zifakwa kwixesha ngokusekelwe kubemi, ngokuphindaphindiweyo emva kweziphumo zobalo. Ekuqaleni, babefana kunye neeklasi ezisetyenziselwa urhulumente wengingqi. Kodwa njengoko inani labantu landa kwaye litshintshile, iinqununu ezithile zinabantu abaneleyo ukwahlula kwizithili ezibini okanye ngaphezulu, ngelixa uluntu lwasemaphandleni lunokuthi lube lukhuni kwaye lugijime lufuneka ukuba lubandakanye iinxalenye ezingaphezu kweyodwa kommandla ukuba zibe nevoti abaneleyo.
Inani lezithintelo liye linyuka liya kwi-338 ukusuka kwi-308 ngo-2013, e-Omeli ka-2013, eyaqala ukusebenza ngo-2015. I-Western Canada kunye ne-Greater Toronto indawo yathola ininzi yoluntu kunye neyona nto intsha. I-Ontario izuze i-15, iBritish Columbia ne-Alberta zithandathu, kwaye iQuebec yafumana ezintathu.
Kwiphondo, imida yemigqaliselo iphinda ishintshe rhoqo xa idibene. Ngomhla wokuhlaziywa kuka-2013, kuphela 44 eyayinemida efanayo njengoko yayingaphambili. Olu tshintsho lwenziwe ukubuyisela kwakhona ukumelelwa ngokusekelwe apho abantu abaninzi bekhona khona. Kungenzeka ukuba utshintsho lwemida lungathintela umphumo wokhetho. Ikomishini elizimeleyo kwiphondo ngalinye libuyisela imigca yemida, kunye negalelo eluntwini.
Utshintsho lwegama lwenziwa ngomthetho.
IYunivesithi yase-Saint Joseph i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data